अहो, कस्तो भाइचारा ! - परिहास - नेपाल
अहो, कस्तो भाइचारा !
एकअर्काको खुट्टा तान्ने नेपालीहरुको राष्ट्रिय संस्कार नै हो । अझ नेताहरुको के कुरा गर्नु ! एउटाले राम्रै काम गर्न लागे पनि अर्कोको पेट पोल्ने । औँला ठड्याइहाल्ने, खुट्टा तानिहाल्ने, टाउको बजाइहाल्ने । अनि, भेँडाको जुधाइमा हामी जनता झिँगासरि मर्नुपर्ने !
तर, अहिले यो प्रवृत्तिमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ । रातारात नेताजीहरुमा त्याग र बलिदानको गुण कोचीकोची भरिएछ । चुनावी माहौल छ । हिजो एकएक भोटका लागि पैसाको खोलादेखि रगतको धारा बगाउन पछि नपर्ने पार्टीका नेता–कार्यकर्ता अहिले त्यही तत्कालीन प्रतिपक्षी पार्टीका लागि भोट माग्न हिँडिरहेका छन् । अहो ! ने ताहरुमा यस्तो भाइचारा, मे लमिलाप र बलिदान झाँगिएपछि अब यो देश उँभो नलाग्ला त ?